Afovoan-tany: hiverina ny hatsiaka sy ny erika | NewsMada
Afovoan-tany: hiverina ny hatsiaka sy ny erika
“Hiverina indray ny hatsiaka sy ny erika, manomboka amin’ny fiandohan’ny herinandro ambony, satria hahazo vahana ny alizay saika manerana ny Nosy”, hoy ny teknisianina mpamantatra ny toetry ny andro, omaly. Amin’ny ilany atsinanan’ny afovoan-tany no tena ahitana ny erika vao marina sy andro manjombona raha hahazo orana kosa ny any antsinanan’ny Nosy. 10°C ny maripana ambany indrindra eto Antananarivo raha 5°C kosa any Antsirabe. 12°C ny any Fianarantsoa. 18°C ka hatramin’ny 22° ny maripana ambony. Ho an’ny anio sy rahampitso, mbola hitoetra ny zavona ny maraina fa hisava ihany izany. Hahatsiaro hafanana hatrany amin’ny antoandro hatramin’ny rahampitso.
Momba ny toetry ny andro, hanorana ny any Antalaha, ny any Analanjirofo, ny any Toamasina. Hiseho kosa ny zavona na zavon-tany vao maraina any amin’ny afovoan-tany, ny ilany andrefana sy ny tapany atsimon’ny Nosy. Ankoatra izay, ho maina ny andro. Ny hariva, handrahona ary mety harahina orana amin’ny faritra sasany any Sava. Ho maina ny andro amin’ny faritra sisa.
Rahampitso, hitoetra ny zavona vao maraina ny amin’ny afovoan-tany, ny ilany andrefana ary ny tapany atsimo. Ho avy ny orana ny any Sava sy ny any Analanjirofo. Ho maina ny faritra sisa. Ny tolakandro kosa, mbola hitohy hatrany ny orana ny any Sava sy ny any Analanjirofo. Hifandimby ny rahona sy ny masoandro ny faritra sisa.